Nhau - Ndeupi musiyano uripo pakati pechinzvimbo chevagari pamwe nekutsiviwa kwebhokisi
Shanduko yebhokisi inowedzera kudiwa munyika medu, kushandiswa kwevakawanda, nzvimbo yevagari uye yekumisikidza yebhokisi chii mutsauko, hatisi kujekesa, anotevera magetsi eNuo kuti iwe ugadzire mhinduro, tarisa pamwe chete.
(1) Bhokisi remhando inoshanduka yekumisikidza kutenderera ipfupi, iyo inogona kupfupisa nguva yeyakare simba rekugovana magetsi nzvimbo neimwe nguva;
(2) iyo nharaunda yediki, senge yekare tembere yekuparadzira kamuri inovhara nzvimbo inopfuura l00m2, uye bhokisi mhando shanduko ingori ingangoita 30m2;
Nekudaro, iro bhokisi remhando shanduko haigone kutsiva zvachose imba yekugovera.
Kunyangwe iro bhokisi remhando shanduko ine zvakanakira pamusoro, ichine zvakawanda zvakaipira.
Photovoltaic bhokisi shanduri fekitori yakagadzirirwa mukati nekunze macomputer emagetsi ekuparadzira michina inosanganisa yakakwira-magetsi switchgear, yekuparadzira shanduri uye yakaderera-voltage yekuparadzira chishandiso zvinoenderana neimwe wiring scheme.
Iyo ine akateedzana ezvakanakira senge yakasimba yakazara seti, diki vhoriyamu, kushomeka kwebasa, zvakadzika mukati mekutakura pakati, kuvandudza magetsi emhando yepamusoro, kudzikisa kurasikirwa, ipfupi simba rekutenderera kutenderera, inoshanduka nzvimbo, yakasimba kuchinjika kune zvakatipoteredza, nyore kuisa uye kushandisa, yakachengeteka uye yakavimbika mashandiro, kushoma kwekudyara, nekukurumidza kuita uye zvichingodaro.
Bhokisi racho rinogona kuiswa munzira, nzira dzegirini, migwagwa yemigwagwa, dzimba dzekugara, zvigadzirwa zvekugadzira, zvivakwa zvepamusoro, nezvimwe.
Nechiremera chimwe chete, shanduko yebhokisi inovhara nzvimbo ye1 / 5 ~ 1/10 chete yenzvimbo inogarwa nevezvigadzirwa zveinjiniya, uye inoderedza zvakanyanya huwandu hwekugadzirwa kweinjiniya nekuvaka. Uye zvakare, shanduko yebhokisi inogona kuregedza vashandisi kunyorera mapurojekiti ezvivakwa, kudzikisira maitiro ekubvumidza, uye kuwana mari shoma uye mhedzisiro inokurumidza.